lahatsoratra 93 890 amin’ny teny malagasy
Ratsiraka, Didier Ignace dia miaramila sy mpanao pôlitika malagasy, indroa filoham-pirenen' i Madagasikara (1975-1993 sy 1997-2002), mpanorina ny antoko politika Andrin' ny Revolisiôna Malagasy (AREMA). Teraka tamin' ny 4 Novambra 1936 tany Vatomandry, faritanin' i Toamasina izy ary maty tamin' ny 28 Marsa 2021 tao Antananarivo.
Zanaka mpiasam-panjakana tamin' ny fanjanahan-tany frantsay izy, lasa manamboninahitra tao amin' ny tafika an-dranomasina malagasy ary lasa minisitry ny raharaham-bahiny nandritra ny fitondrana tetezamita miaramila tamin' ny tanona 1972 hatramin' ny 1975. Taorian' io tetezamita io izy dia nampandany lalàm-panorenana vaovao izay nampiditra an' i Madagasikara ao amin' ny sôsialisma. Nampanao fifidianana izy ary lany ho filohan' ny Repoblika Demôkratika Malagasy (RDM). Tsy nahomby ny teti-pitantanana sy ny fanagasiana ka niteraka fahavoazana teo amin' ny toekaren' i Madagasikara sy ny fiainanana andavanandron' ny Malagasy. Izany dia nahatonga fitakian' ny Hery Velona notarihin' i Zafy Albert ny hisian' ny fanovana ka niteraka fitodram-panjakana tetezamita tamin' ny taona 1991. Tamin' ny taona 1993 dia niala teo amin' ny fitondrana izy ja i Zafy Albert indray no vovoafidy ho filoham-pirenena.
Nirotsaka ho difina ho filoham-pirenena indray Ratsiraka tamin' ny taona 1996 ka lany soa aman-tsara. Navelany ny sôsialisma ka nosoloiny fotokevitra manandratra ny olombelona mirindra amin' ny tontolo iainana (humanisme écologique). Nanova ny lalàm-panorenana izy mba hampitomboany ny fahefany. Nisy fihatsarany ihany ny toekarena.
Taorian' ny fifidianana filoham-pirenena tamin' ny taona 2001 nifanandrenany tamin' i Marc Ravalomanana izay niteraka fahasahiranana teto amin' ny firenena ka nanambaràn-dRavalomanana tena ho filoham-pirenena tamin' ny 2002 dia niala an' Antananarivo Ratsiraka ka nonina any Toamasina, avy eo nankany Frantsa. (tohiny...)
Fetin'ny asa iraisam-pirenena (firenena voaloko mena)